Sheeko Cusub: Qof Xariir Idinka Dhaxeye oo Adkala Tagteen Warqad Raali Gelin ma Udiri Leheed? - Hablaha Media Network
Sheeko Cusub: Qof Xariir Idinka Dhaxeye oo Adkala Tagteen Warqad Raali Gelin ma Udiri Leheed?
HMN:- Inaad warqad raali gelin ah aad udirtid jecelkaga hore arin sahlan ma ahan. Waxa ey ubaahantahay karti, adeeg iyo dareen daacad ah oo ad kuso bandhigeysid waxa niyadada kujiro.
“Waxan ogahay inan waxwalbo haleeye” ayeey qortey gabar ” aniga aya sawab u ahaa isku dhaceena. Sidaasi ayan dareemaya. Wax sawab ah oo an kaga qariyo runta majiran amaba inan been kuushego ama anku qayaamo oo darenkeyga anka qariyo. Maheysti qeeb adiga kaa mid ah marka wax kale ma lumin kari.”
Warqadan dareenka kudheehan aya waxa haweney udirtey saaxibkeda ey kala hareen ee Nick Lutz.ardeygan dhigto jaamacada Amircan University aya warqada soo dhigey bartiisa Twitter ka asigo hoos kaxariiqey qaladadka Grammarka ee warqada.
Warqadan aya muran dhalisey iyado kumanaan qof jawaabta ay ka raadinayan Google. Raali gelin maka bixin lehed qof aad kala harteen? Bulshada aya isku qilaaftey dad aya waxey dheheen Raali gelinta waxa sameyo qof qalbi wanagsan Leh. Waxad kuso bandhigeysa qaladka meesha kadhacay adigo sido kale weydineso cafis. Qof waqti badan aad xariir leheden aamusnan maku kala hari kartaan?
Halka qeeb kamid ah bulshada eey dhehen looma baahna Raali gelis wuu/wey mudan tahay in sidaasi lagu jaro.
Johnny Cassell oo ah qabiir arimaha xariirka aya yiri ” wey fiican tahay Raali gelinta maxa yeeley waad nafiseysa marka aad so bamdhigto waxa niyadada kujiro. Waxa fiican inaad raali gelin kabixiso lakinse wa markad live aad isku arkeysan si aad u aragto xaladisa.
Inta badan xariirka aya sixun kudhamaado iyado wax rali gelin ah laga bixinin. Waxa intaasi dheer laga yaabo inuu talabo dheer ah qaado oo uu Ku Block gareyo aaladaha adka wada xariiri jirten. Aqristayaashena qiimaha iyo qayaha lahow, raali gelin maka bixin lehed qofka aad kala harteen? Fadlan commentiga hoos nala wadaag